Maivana American Vintage Style, Manorina fahatsapana ny fomban'ny fiainana | Famolavolana Hongfu Gauge & Haingo malefaka Yishe - Faucets lakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Fomba amerikana maivana amerikana, manangana fombafomba amin'ny fiainana | Hongfu Gauge Design & Yishe malefaka haingo
Fomba amerikana maivana amerikana, manangana fombafomba amin'ny fiainana | Hongfu Gauge Design & Yishe malefaka haingo
2021 / 06 / 13 FisokajianaInterior design 5711 0
Yishe Interior Design Alliance
“Mihevitra aho fa tia anao aho.
Satria isaky ny mahita anao aho dia mitempo haingana kokoa ny foko. ”
FANAFALANA - OATH
Olona tsy fantatra roa manomboka amin'ny fivoriana ka hatramin'ny fifankatiavana, karazan-javatra inona no ilaina mba hamakivakiana ity dia ity hahatratra ny efitrano malalaky ny fanambadiana. Ary inona ny fitiavana, angamba rehefa mijery anao aho dia tsy afaka miaina. Rehefa mihodina ianao dia tsy mitodika any am-pitaintainanana aho, toy ny hoe tsy nisy n'inona n'inona, raha ny marina dia efa raiki-tahotra ny fony.
Mampanantena ny hihazona ny tanako isan'andro ianao, hahita ny tontolo tsara tarehy, handeha ho any amoron-dranomasina tiako haleha, feno ny tsiky ny fakan-tsary, feno alokaloka ny saina. Izay ilay izy, mifankatia. Izay no ananantsika trano. Ary io fitiavana io dia nafindra tamin'ny tsy hita maso ho amin'ny trano azo tsapain-tanana. Nijery ny hakantony izahay, nijery sary isan-karazany tao amin'ity trano vaovao ity.
Zi Xi sy Fang Xian Sen dia mpivady vao mifankatia izay mifankatia. Andriamatoa Fang dia niantso ny tenany ho "Kemalovsky" ary Zixi ho "Zixibayeva". Ny anaram-bosotra mahatsikaiky sy manokana toy izany dia avy amin'ny teny tokana amin'ny anaran'izy ireo. Sady misy heviny no feno ny hatsaran'ny tsirairay. Ny trano vaovao dia toy ity ihany, izay azy ireo ihany.
▲ Lahatsary- Ny asa vaovaon'i Yishe Design “Thumping Heart
DESIGN - FAHATSORANA
Ny zavatra voalohany nataonay tamin'ny famolavolana loko dia ny mamaritra ny loko ambany fitehirizana, izay ahazoana aina sy mandroso. Ny loko manga tian'i Zixi dia ampiasaina ho loko manjaka indrindra eo amin'ny habakabaka. Bruce manga toy ny loko ambadika misy faritra manga misy ranomandry, mitovy loko hanomezana fahatsapana fandanjana tsy tapaka. Ny lokon'ny dite ronono mifangaro ho loko faharoa dia malefaka sy marefo kokoa noho ny fiatraikany mahery, izay mora azo.
Taorian'ny niadian-kevitra tamin'i Zi Xi sy ny vadiny, ny fanovana ankapobeny dia nihodinkodina tamin'ny hoe "tsy fanovana lehibe, fa fanovana ampahany mba hanitsiana ilay fomba nifototra tamin'ny fepetra tany am-boalohany (tamin'ny inverse)". Nandinika ny toe-javatra nisy teo amin'ny habakabaka tany am-boalohany izahay, ary tamin'ny alalàn'ny fandalinana lalindalina kokoa ny fomba fiainany sy ny safidin'ny vokatra, dia nilamina tamin'ny tononkira amerikana maivana izahay.
Fangaro sy lalao Retro sy amerikana mahafinaritra
Ny trano voadio tany am-boalohany dia metatra toradroa, rehefa avy nandinika ny fandanjana ny vokany sy ny fandaminana ara-bola. Mbola mitovy ny hevitry ny endritsika: esory izay tsy maintsy esorina. Nanao varotra teo amin'ny hatsarana sy ny fiasa izahay. Ao anatin'ny fanaraha-maso ny tetibola hahatratrarana ny fanovana. Noho izany, ny fanavaozana dia nifantoka tamin'ny: famehezana ny varavarankely eo amin'ny lavarangana fijerena, ny tontolon'ny fahitalavitra, ny fanesorana ny fikororohana taila ary ny fanoloana ny lokon'ny latsa-drindrina. Miorina amin'ny fitazonana ireo taila amin'ny tany tsy azo ovaina, ny fiheverana ny fiantraikan'ny tany dia mihalemy amin'ny fametrahana fanaka sy ny firakotra karipetra.
Raha ny hitazomana ny faritra lehibe misy fanaka sarotra tsy voakitika, dia nojerentsika ny fifanakalozana eo anelanelan'ny "vaovao sy ny taloha". Ny fomba dia mifototra amin'ny loko volom-boaloboka, mifangaro amin'ireo singa amerikanina izay tian'ny tompony. Nopotehinay ny endrika rindrin'ny TV tany am-boalohany ary nanamboatra fatana iray miaraka amina fotony vita amin'ny plasterboard izahay. Ny TV dia voasokitra tsara, ary ny fatana elektronika dia miteraka hafanana nefa tsy very ny firafitra.
Ny faritry ny hetsika ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no ivon-toeran'ny faritra ho an'ny daholobe. Mba hampifantoka bebe kokoa ny seha-paran'ny seza dia nifidy an'i Bruiserland ho loko ambadika izahay. Ny fanaka vita amin'ny hazo matevina miloko volondavenona dia miaraka amin'ny ondana sy karipetra. Ny fahasamihafana ambany-matevina amin'ny loko mafana sy mangatsiaka dia malefaka sy tsy manam-paharoa, ary ny lambam-pandriana mahazatra an'ny Harbour House mifangaro amin'ny landy sy rongony vita amin'ny lamba geometrika dia manome hazavana sy haitraitra ny habakabaka. Ny fitambaran'ireo sary hosodoko volamena maoderina sy maoderina dia manaparitaka ny karazana mahazatra ary manome ny habaka dinamika hafa.
Ny lavarangana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mifamatotra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary ny fampisehoana ny takelaka vita sokitra misy fahatsapana endrika sy firavaka firavaka dia mifandona mba hamoronana fomba mirindra sy rivo-piainana mampahazo aina, mahatonga ny olona hahatsapa ho toy ny an'ny Amerikana Retro sarimihetsika, feno fahasambarana.
Fiainana sy fombafomba
Ny rindrina ambadiky ny efitrano fandraisam-bahiny dia mitohy hatrany amin'ny efitrano fisakafoana. Nesorinay ny endrika rindrina any aoriana ary nosoloinay loko vita amin'ny lanezy vita amin'ny ranomandry mba hananana vokatra madio sy mangarahara. Ny efitrano fisakafoana iray manontolo dia apetraka amin'ny fikirakirana afovoany, izay misy fiantraikany eo amin'ny habakabaka kokoa noho ny latabatra fisakafoana toradroa misy latabatra boribory, ary mamela toerana bebe kokoa ho an'ny lalantsara ankavia sy ankavanana.
Ny zavatra mendri-piderana indrindra amin'ity trano ity dia ny jiro, rehefa ampy ny hazavana, miditra amin'ny alàlan'ny lakozia ny masoandro, mianatra ary misy efitrano hafa ary midina, mila an'ity atmosfera voajanahary ity ny trano. Ny efitrano fisakafoana iray manontolo dia 4100mm ny halavany, misy 400mm lalimoara lalina amin'ny lafiny roa sy latabatra fisakafoana 1400mm, mamela toerana malalaka ho an'ny 900mm isaky ny lafiny amin'ny lalan-kely.
Madio sy tsotra
Nesorinay ny rindrina ambadiky ny efitrano fandrianana voalohany ary nosoloinay loko emulsion manga ranomandry izy, ary navelanay tsy niova ny fanaka sarotra hafa rehetra, niezaka nanao ny fanovana lehibe indrindra tamin'ny fanovana kely izahay. Mba hanohizana ny tsy fitovizan'ny fomba amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, dia nampiasa andalana plaster izahay mba hanaovana haingon-trano karazana madio sy tsotra. Ny efitrano fatoriana dia novaina, feno ny fomba amerikanina, na dia ny gorodona voaloko atiny misy kisoa am-boalohany aza dia hita fa miharo fatratra.
Blank & indentical
Ity efitrano ity dia ampiasaina ho efitrano fandraisam-bahiny vonjimaika, noho izany dia mila mieritreritra ny hihaona amin'ny asan'ny torimaso sy ny fitehirizana akanjo fotsiny isika. Ny lokon'ny lateksan'ny rindrina ihany no nosoloina ary ny layout mahazatra dia vita, saingy mazava ho azy na dia tsy ampiasaina intsony aza izy io dia tokony mbola ho maro loko. Fitaovana malefaka miaraka amin'ny fitohizan'ny loko mifandona amin'ny hatsiaka ambany sy mangatsiaka, volomboasary Hermes, maitso oliva ary manga manga.
Tsy miraharaha sy miova
Kely sy metatra toradroa ny fandinihana, noho izany dia voafetra ny toerana hilalaovana amin'ny haingon-trano henjana, ny lokon'ny latex ihany no nosoloinay. Ny endriny tany am-boalohany dia somary matevina, mba hihaonana amin'ny fitehirizana sy ny filàn'ny birao. Nanao varotra am-perinasa izahay, fitoeram-bokotra zorony L + latabatra kely misy habaka, ampy ampiasaina fotsiny nefa misy vokany manamafy ny habaka tsy ampoizina. Zava-dehibe ny fahalalana fa ny habaka fotsy mifandimby dia mahatonga ny habaka hanana kalitao bebe kokoa.
Ny famolavolana ny famolavolana vaovao dia mifototra amin'ny foto-kevitry ny "fitoeram-bokatra miendrika L", izay habaka zoro 1400mm ny halavany ary 600mm ny sakany, mamela toerana malalaka hampiasaina ho lalantsara, mba hahafahan'ny roa tonta ampiasaina vonjimaika.
▲ Kisary firafitra voalohany
Ny famakafakana ny layout
Tamin'ny fotoana voalohany nahitako ny trano dia afaka nahita ny firafitry ny trano aho, ka tsy nanana fiovana lehibe. Nasiany tombo-kase fotsiny ny varavarankelin'ny lavarangana fandraisam-bahiny ary nandondona ny varavarana mikorisa ny efitrano fandraisam-bahiny izy mba hampitomboana ny fahamendrehan'ilay toerana.
Faritra tetik'asa / 158㎡
Karazana tetikasa / Efitra efatra, efitrano roa, efitra fandroana telo
Tetikasa vidiny / 25w
Toerana / Chengdu - Zhanghai Jinjiang City Huajian
Karazan-endrika / trano nohavaozina - Volavola fanaka malefaka - Fiovan'ny birao fanaka sarotra
Previous :: Ny hatsaran'ny fahatsorana sy ny famerana, kitiho ny bokotra fiatoana kely ho an'ny famolavolana OPS OPS Next: Mitadiava toerana mahafinaritra eo amin'ny tontolo voajanahary | Taiguk Shapeshang
2021 / 08 / 15 3343
2021 / 08 / 15 4246
2021 / 08 / 15 3746
2021 / 08 / 14 3472
2021 / 08 / 14 3885
2021 / 08 / 14 3290